प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा उठाएका १२ विषय - समाचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ६, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संसदमा पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार संघीय संसदका दुवै सदनमा जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनमा बहुमतबाट पारित पनि भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण मुद्दामा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विषयदेखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदमसम्मका विषयमा बोले । यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भारतले मिचेको भूभाग फिर्ता लिन सरकारले गर्ने कुटनीतिक पहलदेखि नेपालसँग भएका तथ्य प्रमाणहरुको प्रसंगसमेत उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका महत्वपूर्ण १२ विषय
१) नक्सा जारी तमासाका लागि हैन
प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय तमासाका लागि नभएको बताए । ‘यो कुनै चलाखीको हिसाब वा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन गरिएको होइन । कुनै तमासा गरिएको होइन, यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो । हाम्रो भू–भाग हो । हामी फिर्ता लिन्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक संवादमार्फत् नेपाली भूमि फिर्ता लिने अठोटका नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय लिएको बताए । ‘यसको निष्कर्ष निकालिन्छ । हाम्रो भू–भाग फिर्ता लिइछाड्छौं,’ ओलीले भने । विवादास्पद भनिए पनि यो नेपाली भू–भाग भएको र त्यहाँ नेपालले अर्घेल्याई पनि नगरेको उनले बताए ।
२) नक्सामा समेटिएको भूगोल फिर्ता
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइछाड्ने बताए । ‘हामी सत्य र न्यायको पक्षमा छौं । हामी भारतसँग कुरा गरेर हाम्रो कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ता गराउनेछौं,’ ओलीले भने ।
विसं २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिए तथा अब लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय ओझेलमा पर्न नदिने बताए । ‘अब यो ओझेल पर्ने छैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ ।’
३) राष्ट्रियता सानो–ठूलो हुँदैन
नेपालको भूमि मिचिएको प्रसंग जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देश, भूगोल वा जनसंख्या ठूलो–सानो भए पनि राष्ट्रियता ठूलो सानो नहुने बताए ।
‘कुनै देश भूगोल वा जनसंख्यामा ठूलो–सानो र विकासमा अगाडि–पछाडि हुन सक्छ तर राष्ट्रियता सानो–ठूलो हुन सक्दैन, सबै राष्ट्रले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो नीति आफूले नै तय गर्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘मुलुकको स्वाधिनता महसुस त के परिकल्पना गर्न नसक्ने हुनु हुँदैन । कुनै देशको भूगोल ठूलो वा सानो हुनसक्छ, जनसंख्या ठूलो वा सानो हुनसक्छ । विकासमा अगाडि वा पछाडि हुनसक्छ । तर, स्वाधिनता सानो वा ठूलो हुन सक्दैन । सबैले समानरूपमा स्वाधिनता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । आफना र विश्वसँग सम्बन्धित नीति आफूले तय गर्न पाउनुपर्छ ।’
४) भारतलाई स्पष्ट जवाफ
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको मिचाहा प्रवृत्तितर्फ इंगित गर्दै भारतीय प्रतीक चिन्हको प्रसंग पनि उप्काए । भारतको प्रतीक चिन्ह चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिहंमेव जयते’ को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको पनि ओलीले बताए ।
‘अशोकाले स्थापना गरेको चारतिर फर्केको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सत्यमेव जयते भारतको प्रतीक चिन्हमा लेखेको छ तर म विश्वास गर्छु, हामी सबै नेपालीले सत्यमेव जयतेमा विश्वास गर्छौ । म भारतलाई सोध्नेवाला छु कि सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेर विवादित बनाएको पनि बताए । ‘भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसपछि कालापानीमा जान ब्लक भयौं । त्यसबेलाका शासकहरूले बोल्न डराए । वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अवगत गराउन चाहन्छु कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय ओझेल पर्न दिने छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमि भारतले अकुपाइ गरेर, अर्घेल्याइँ गरेर विवादित बनाइएको हो ।’
उनले तथ्य प्रमाणका आधारमा मैत्रीभावका साथ समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘नेपाल र भारतको भिन्नताका कारण न्याय निरुपण, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी उत्तेजना र आवेशमा छैनौं, हामी गम्भीर छौं । तथ्य प्रमाणका आधारमा मैत्रीभावका साथ समस्या समाधान गर्छौं ।’ उनले समस्या समाधान गर्ने भनेको दुश्मनी नभई मित्रता गर्नु रहेको विश्लेषण गर ।
भारतलाई पठाइएजस्तै कूटनीतिक नोट चीन सरकारलाई सोधिन्छ या सोधिँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद भइरहेको र चीनले मानसरोवरसम्मको यात्राका लागि भारतसँग सहकार्य भएको र सीमा मिचिएको सन्दर्भमा भारतले नेपालसँग कुरा गर्नुपर्ने जवाफ दिएको जानकारी दिए ।
५) सरकार ढाल्ने खेल
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउने अभिव्यक्ति नदिन छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आग्रह पनि गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जनताबाट निर्वाचित भएकाले स्वाभिमानमाथि ठेस पुग्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘यो सरकार जानै जानै लागेको थियो फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अड्याइदियो,’ नेकपाभित्रको केही पहिलेको किचलो र त्यसबेला चिनियाँ राजदूतले नेताहरूलाई भेटेको प्रसंगलाई लिएर आएका अभिव्यक्तितर्फ केन्द्रित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर, निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए हुन्थ्यो ।’
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पनि नेकपाभित्र चिनियाँ राजदूतको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । ती प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘यो सरकार जनताले बनाएको हो । जनताबाट निर्वाचित हो । कुनै पनि देशको आशिर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने कल्पना नगरे हुन्छ । यो जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो ।’
६) एमसीसीबारे संसदबाटै निर्णय
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर निर्णय लिन संसद्लाई आग्रह गरे । उनले राजनीतिक दलभित्रका विवादसँग संसदको सरोकार नभएकाले संसद्ले सम्पतिको रूपमा स्वीकार गरेको सम्झौताबारे अब निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
आफ्नै पार्टीभित्र एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भइरहेको बेला सभामुखको टेबुलमा उक्त सम्झौता पुगेकाले निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका हुन् । एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एक बर्ष अगाडि नै संसद सचिवालयमा दर्ता छ ।
एमसीसी सम्झौताबारे दलहरूका बीचमा निर्णय गर्नुपर्ने भए संसदीय दलमा कुरा हुने तर संसदले भने चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले चाहना छ । ‘दलहरूका बीचमा छलफल गर्नुछ, केही गर्नुछ भने केही गर्नेछन्, ती दलहरुका कुरा भए । संसदको कुरा भएन । दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, हृवीप जारी होलान् । फेल गर्ने भए पनि । तर, संसदको सम्पतिको रूपमा आइसकेको सम्झौताबारे निर्णय संसदले गर्नुपर्छ ।’
७) भ्रष्टाचार भएको भन्ने प्रचार गलत
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार र अन्य प्रकारको अवाञ्छित ‘डिलिङ’मा आफूले कुनै सरोकार नराख्ने र विश्वास नगर्ने दावी गरे । कोरोना महामारीको सामना गर्न छोटो प्रक्रियाबाट अत्यावश्यक गुणस्तरीय सामान ल्याउन सकिने विद्यमान कानूनका आधारमा सम्बन्धित विभागले सामान खरिदको सम्झौता रद्द गरेको र त्यससँग आफ्नो कुनै सरोकार नरहेको बताए ।
‘हरेक कुरामा र मन नपरेकालाई जोडेर प्रचार गर्नु उचित हुँदैन । जवाफ नदिइकन निर्दोषलाई पनि दोषी भनेर प्रचार गरिनु भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान होइन । कुनै कम्पनीले सामान नपाउँदा विरोध र गलत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । त्रुटि भए सच्याइन्छ । बदमासी भएमा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
८) लोकतन्त्रको परिभाषा
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा लोकतन्त्रको परिभाषासमेत दिए । लोकतन्त्रबारे केही भन्नुछ भन्दै ओलीले भने, ‘हामी मुलुकमा न्याय र समानतासहितको विस्तृत लोकतन्त्रको पालनाका पक्षमा छौं । हामी सर्फेसियल वा चल्ते चलाते लोकतन्त्रका पक्षमा छैनौं ।’
संवैधानिक आयोगमा रिक्तता भइरहेकाले परिषद्सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी छिटो काम गर्न खोजिएकामा दलहरुको सुझावमा अध्यादेश फिर्ता लिइएको र आवश्यकतानुसार संसदमै उक्त संशोधन ल्याउन सकिने पनि उनले बताए ।
९) सामाजिक सञ्जाल हेर्नै नसकिने भयो
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा हेर्न र सुन्न नसकिनेखालका कुरा पनि आउने गरेकामा दुःख व्यक्त गरे । ‘हाम्रो संस्कार कस्तो भएर जाँदैछ ? मुख छाडेर नबोली धीतै नमर्ने ?’ उनले भने, ‘पुराना ज्ञान, शास्त्र, अनुभव र मान्यता महत्वपूर्ण हुने भए पनि पुल बनिसकेपछि जुत्ता खोलेर खोलो तर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको पालना गरिरहनु हुँदैन । संसदीय अभ्यासमा नयाँ अवधारणा अघि सार्न आवश्यक छ ।’
१०) संविधान संशोधन
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा, निशान छाप र प्रतीक चिन्हसहितको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा चाँडै संसद्मा ल्याइने बताए ।
संविधानको अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव चाँडै संसद्मा ल्याइने उनले बताए । अनुसूची ३ सँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावबाहेक अन्य विषयमा भने तत्काल संविधान संशोधन नहुने पनि उनले प्रष्ट गरेका छन् ।
‘अरू विषय हुन सक्छ । त्यसबारे भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौं । तर, सबैभन्दा बढी तत्कालीन महत्वको विषय वार्ता, नक्सा र भूमिफिर्तासँग सम्बन्धित छ । मैले विश्वास लिएको छु, त्यो (संविधान संशोधन प्रस्ताव) पारित हुन्छ,’ उनले भने ।
११) विदेशमा रहेका नेपाली
विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई फिर्ता ल्याउन दिइएको सुझावबारे प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीलाई जहाज चार्टर्ड गरेर फिर्ता ल्याउनु र क्वरेन्टिनमा राख्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्ट (भावना) मा हृवारहृवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने ? त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौं,’ ओलीले भनेका थिए ।
१२) कोरोना, मृत्य र अर्थतन्त्र
कोरोनाविरुद्धको लडाइँ र विकास निर्माणलगायतका काम सँगसँगै अगाडि बढाएको पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहिलो प्राथमिकता भएको बताए ।
‘यतिबेला कोरोनाका विरुद्ध लड्दै छौं र सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेका छौं । यसको अर्थ अरु काम गर्दैनौं भन्ने होइन,’ ओलीले भने, ‘हाम्रो शक्ति थोरै घटेको छ । तर, सामाजिक उत्तरदायीत्व र विकास निर्माणका काम गर्नेछौं । परिस्थितिअनुसार काम गर्नेछौं ।’
उनले कोरोना भाइरसबाट कसैको पनि मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रयास असफल भएको बताए । ‘हाम्रो प्रयास कोही पनि नेपालमा कोरोनाको कारणले वा कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् थियो । हाम्रो प्रयास विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ र २ जनाको निधन भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बढी परीक्षण गर्ने, भरपर्दो ढंगले परीक्षण गर्ने । क्वारेन्टाइन भरपर्दो गर्ने र आइसोलेसन व्यवस्थित गर्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध गर्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ ।’
उनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले उत्पादनमा ह्रास आएको र राजश्व कम उठेको, रेमिन्ट्यान्समा असर परेको जनाउँदै यसको सामना गरेर जीवन र समाज चलाउनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका लागि सरकार त्यस बाटोमा अग्रसर भएको दावी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्दै मानवजातिले कोरोना भाईरसलाई पराजित गर्ने बताए । ‘मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ । नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउन र विश्व कोरोना मुक्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ ओलीले भने ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ १९:५३
वृद्धको खुट्टा भाँच्‍ने प्रहरी प्रदेश तानिए
जेष्ठ ६, २०७७ भूषण यादव
वीरगन्ज — दूध लिन आएका वृद्धमाथि लाठी प्रहार गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) लाई अनुसन्धानका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा झिकाइएको छ ।
आइतबार बिहान २ जना नातिनीका लागि दूध लिन जाँदा असई लालबाबु साहको लाठी प्रहारले वीरगन्ज महानगरपालिका १६का ६७ वर्षीय नागेन्द्र पटेलको दाहिने खुट्टा भाँचिएको थियो ।
प्रहरीको आदेश मानेर फर्किने क्रममा पछाडिबाट हिर्काएको लाठीले पटेलको खुट्टा भाँचिएको उजागर भएपछि प्रदेश २ का प्रहरी कार्यालयले असई साहलाई जनकपुर झिकाएर अनुसन्धान थालेको छ । प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा असई लालबाबु साहले कुटपिट गरेको पाइएको बताए ।
‘वृद्धमाथि दुर्व्यवहार गरेको समाचार उजागर भएपछि असईलाई अनुसन्धानका लागि तानिएको हो,’ डीआईजी सिंहले भने, ‘प्रारम्भीक अनुसन्धानमा असईले कुटपिट गरेको पाइएको छ । कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’अन्य प्रहरीलाई पनि संयमित रहन डीआईजी सिंहले निर्देशन दिएका छन् ।
असई साह वीरगन्जको नयाँ बसपार्क अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत थिए ।
नातिनीलाई दूध लिन गएका हजुरबामाथि प्रहरीको लाठी, खुट्टा भाँच्चियो